टेलिकमका सेवा यी निःशुल्क नम्बरमार्फत लिन सकिन्छ, कुन नम्बरबाट के सेवा ? « Sansar News
टेलिकमका सेवा यी निःशुल्क नम्बरमार्फत लिन सकिन्छ, कुन नम्बरबाट के सेवा ?
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १३:१६
२६ चैत्र, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको सेवा बारेमा जानकारी लिन तथा गुनासा राख्नका लागि विभिन्न नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले उपलब्ध गराएको १९१, १९७, १९८ र १४९८ नम्बरहरु मार्फत टेलिकमका विभिन्न सेवाबारे बुझ्न र गुनासा टिपाउन सकिने धेरै नै उपयोगी बनेको जनाएको छ । सोधपुछ तथा गुनासा व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएका यी नम्बर निःशुल्क हुन् ।
जीएसएम, सीडीएमए र वाइम्याक्स सेवाको बारेमा जानकारी लिनका लागि १९१ नम्बरमा कल गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन अर्थात स्थानीय टेलिफोनको नम्बर थाहा पाउनका लागि १९७ नम्बरमा मोबाइल वा कुनैपनि टेलिफोन नम्बरबाट कल गर्न सकिन्छ । त्यसपछि अपरेटरले ग्राहकले खोजेको व्यक्ति वा संस्थाको टेलिफोन नम्बर टेलिफोनबाटै उपलब्ध गराउँछ ।
यसैगरी टेलिकमका सेवाहरुका बारेमा गुनासो टिपाउनका लागि १९८ नम्बरमा डायल गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले सञ्चालन गरिरहेको तारवाला स्थानीय टेलिफोन, एडीएसएल, भिस्याट टेलिफोन, फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) र लिज लाइन मर्मतका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
मोबाइल र वाइम्याक्स सेवाबारे जानकारी लिनका लागि १४९८ मा फोन गर्न सकिन्छ ।मोबाइल तथा वाइम्याक्स सेवा सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो मात्र नभई सेवा प्रयोगका बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त गर्नुपरेमा पनि यस नम्बरमा कल गर्न सकिन्छ।